Download Master v5.12.7.1309 Free...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Download Master v5.12.7.1309 Free လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ဒီကောင်လေးယာ Free Version ဆိုပေမဲ့ Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Netscape တို့မှာ သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်...! အသင့်အတင့်ကောင်းတဲ့ Software ကောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့် တင်ပေးလိုက်ရတာပါ...! 2012 မှထွက်လာတဲ့ Software လေးပါ Update လေးတွေထွက်လာရင်တော့ ကျွန်တော် တင်ပေးသွားမှာပါ...! Windows 2000, XP, Vista ,7 တို့မှာ သုံးရတာအဆင်ပြေဆုံးပါပဲ...! ကျွန်တော် Mediafire လေးဖြင့် တင်ပေးထားပါတယ်...!
"Available Features in Download Master ":
# Have schedule download features to download files according to your time.
# Have ‘Dialer’ features for dial-up connections.
#Have FTP explorer
# Able to search different files, music, programs, games
# Have toolbar for IE, and Firefox-DX Bar
# Supported protocols FTP, HTTP, HTTPS
# Download audio, video, images form various sites with high speed
# Have all user friendly simple graphical interface.
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 16.55 MB )
No Response to "Download Master v5.12.7.1309 Free...!"